Crello: Mubhadharo-Se-Iwe-Enda Graphics Mhariri nezviuru zveMakanaka Matemplate | Martech Zone
Crello: Iyo Kubhadhara-Se-Iwe-Enda Graphics Mhariri nezviuru zveZvakanaka Matemplate
Muvhuro, September 7, 2020 Chipiri, February 9, 2021 Douglas Karr
Isu tiri vateveri vakuru ve Depositphotos, inodhura stock stock, graphic, uye vhidhiyo mhinduro. Ndosaka tichivaita vakanyorwa semubatsiri uye vachiramba vachisimudzira basa ravo pane yedu saiti uye nevatengi vedu. Ehezve, isu tiri zvakare vanobatana. Chikwata chiri kuseri kwaDepositphotos chatanga Crello, yemahara yekuona mupepeti iyo inopihwa simba nemamirioni ematafura akanaka.
Chiyeuchidzo che Canva (pasina chikonzero chekusaina-up), Crello inopa anopfuura gumi nemazana mashanu emifananidzo yemahara, inosanganisira mapikicha, maekoni, mapatani, maveji, mafuremu, maumbirwo, uye mifananidzo. Zvinhu zvakabhadharwa zvinodhura kusvika kumadhora 10,500 imwe neimwe, uye kushandiswa kwemifananidzo hakuganhurwe, saka chinhu chakabhadharwa chinoramba chiripo kuti chishandiswe nekusingaperi.
Crello inobatsira iyo yakajeka-yakadenhwa kugadzira inoshamisika midhiya midhiya mifananidzo, ad mireza, maposta, email misoro, uye mamwe mafomati akakurumbira. Crello inosanganisira yakazara-yakatarwa pikicha mhariri kuti iwe ugone kurodha uye kugadzirisa ako wega kumashure mifananidzo.
Zvimiro zveCrello zvinosanganisira:
Nyore yekutanga kit - muunganidzwa wemakumi matanhatu ematanhatu emahara matemplate, zviuru gumi+ zvekugadzira zvinhu, uye pamusoro pe6,000 stock yepamusoro resolution mafoto.
Mafomati Ekubuda - 29 mafomati ane saizi dzakasetwa, kusanganisira Facebook Ads, Facebook Covers, Facebook Zvinyorwa, Youtube Chiteshi Art, Twitter Zvinyorwa, Twitter Misoro, Instagram Zvinyorwa uye Instagram Ads.
Personal bata: sarudzo yekuisa yako wega mifananidzo uye mafonti kuti ugadzire yakasarudzika yezvinyorwa.
Modifications: seti yezvinhu zvinoonekwa uye mafirita ekugadzirisa mufananidzo.
Multiple rezinesi rekushandisa: zvakatengwa zvinhu zveprimiyamu zvinoramba zviripo zvekushandisa zvakare.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti zvinoonekwa zvinoonekwa zvinoita zvakapetwa ka4.4 pane kungoita zvinyorwa pachena pasocial media mapuratifomu, uye emhando yepamusoro mifananidzo ine maitiro akanaka pakubatana.
Crello inogona kubatsira kune vanhu vasina graphic dhizaini yekumashure, avo vanoda kuvandudza zviri nyore mhando yezvinhu zvavo zvinoonekwa, izvo zvakare zvinobatsira kuchengetedza hunyanzvi hwehukama hwemagariro.
Gadzira Yako Yekutanga Graphic!
Tags: canvacrellowobvafacebook adsFacebook Inovharafacebook postsGraphicsInstagram AdsInstagram Zvinyorwaphotos mupepetiTwitter MisoroTwitter Zvinyorwavisual mupepetiYouTube Chiteshi Art
SiteKick: Shandura White-Labeled Analytics Kuzivisa kune vako Vatengi